स्वास्थ्य पेज » कोरोना अस्पताल बुटवलमा २ जनाको मृत्यु कोरोना अस्पताल बुटवलमा २ जनाको मृत्यु – स्वास्थ्य पेज
कोरोना अस्पताल बुटवलमा २ जनाको मृत्यु
बुटवलको कोरोना विषेश अस्थायी अस्पतालमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । उपचारका लागि आइसोलेसनमा भर्ना भएका कपिलवस्तुको कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नंं. २ तौलिहवाका ४२ वर्षीय कृष्णकुमार गुप्ता र कपिलवस्तुको कृष्णनगरका २५ वर्षीय प्रदीप तेलीको गएराति मृत्यु भएको हो ।
गुप्तामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भए पनि तेलीको स्वाब परीक्षण हुन बाँकी रहेको अस्पतालका कोरोना फोकल पर्सन डा. सुदर्शन थापाले बताउनुभयो । गुप्ता साउन २५ गते र तेली साउन २७ गते अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको थियो । तेलीको स्वाबको पीसीआर परीक्षण गरिँदै छ ।